Kuboshwe ababili ngecala lesibhambu esingekho emthethweni | News24
Kuboshwe ababili ngecala lesibhambu esingekho emthethweni
Isithombe: SithunyelweAmaphoyisa aseHanover abophe abasolwa ababili abatholakale nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu.
NGOMGQIBELO, ngomhlaka 9 kuSepthemba, uSayitsheni Zungu noConstable Mkwalala basemaphoyiseni aseHanover babophe abasolwa ababili ngecala lokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu.
NgoMgqibelo ebusuku uZungu noMkwalala bathole umbiko ngabesilisa ababili abekade besolelwa ukuphatha isibhamu esingekho emthethweni elokishini lase Trustfeed.
Okhulumela amaphoyisa, uKaputeni Gay Ebrahim uthe: “Kuboshwe abasolwa ababili ngecala lokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni nezinhlamvu kanti bavele enkantolo yeMantshi yaseHanover ngoMsombuluko, ngomhlaka 11 kuSepthemba,” kusho yena.
Uthe isibhamu sizohlolwa ukuthola ukuthi ngabe sakesasetshenziswa kwezinye izigameko zobugebengu.
Uqhube wathi amalungu e-Vispol yasemaphoyiseni aseMountain Rise athule umkhankaso wokubhekana nobugebengu ngempelasonto, kusukela ngomhlaka 8 kuya ku 10 Septhemba, ukuze kuzoba nokuthula emphakathini engaphansi kwalesi siteshi.
Uthe: “Lomkhankaso uphethe ngokuboshwa kwabasolwa bangu-34 abasolwa ngamacala ahlukahlukene okubalwa kuwona ukuphanga uhlomile, ukugqekeza, ukuhlasela ngenhloso yokulimaza, ukutholakala nezidakamizwa, ukweba kanye nokucekela phansi impahla,” kusho uKaputeni Ebrahim.
Umphathi siteshi samaphoyisa aseMountain Rise, uBrigadier Boxer Pillay uncome amalungu e-Vispol ngomsebenzi awenzile ngempelasonto.
Uthe imikhankaso yalolu hlobo iziqhubeka ezindaweni ezingaphansi kwalesi siteshi saseMountain Rise ukuze kuzoqedwa ngobugebengu kulemiphakathi.
Uqhube ngokwexwayisa umphakathi ukuthi amaphoyisa asethole ukuthi izinga lokudunwa kwezimoto zohlobo lwe-VW Polo liyakhuphuka.
Uthe: “Sithanda ukunxusa abashayeli bezimoto zalolu hlobo ukuba behlezi beqaphele,” kusho uBrigadier Pillay.